Olee otú bubata kọntaktị iPhone ka Mac & mmekọrịta Ndi ana-akpo si Mac ka iPhone
Olee otú bubata kọntaktị iPhone ka Mac na otú Tinye Ndi ana-akpo ka iPhone on Mac
Ọ ga-bubata kọntaktị m iPhone 5 m Mac adreesị akwụkwọ? - Ellen
m zụtara a mac, olee otú m nyefee kọntaktị site na m iPhone 4s ka ọhụrụ m Mac Pro? - David
Olee otú m syncing kọntaktị site na m Mac ka iPhone, ebe ọ bụ na Info taabụ na iTunes ọ bụla ọzọ. N'ihi! - Claire
O yiri ka ọtụtụ iPhone ọrụ amaghị otú mbubata kọntaktị site na iPhone ka Mac. (lee otú bubata kọntaktị iPhone ka windows PC) N'eziokwu, e nwere ọtụtụ ihe bara uru ụzọ. Ị nwere ike iji iCloud ma ọ bụ atọ ọzọ na-ngwaọrụ ịzọpụta kọntaktị site na gị iPhone na Mac. Dị ka otú tinye kọntaktị site na Mac ka iPhone, i nwere ike ịgbalị iCloud ma ọ bụ ndị ọzọ na ígwé ojii ọrụ iji nweta ihe mgbaru ọsọ gị. Ihe ọmụma zuru ezu, biko gụọ on:
Part 1. Olee mbubata kọntaktị site na iPhone ka Mac
Part 2. Olee ka mmekọrịta Ndi ana-akpo si Mac ka iPhone
Dị ka m na e kwuru n'elu, E nwere ọtụtụ ụzọ dị mbupụ kọntaktị site na iPhone ka Mac. Lelee nkọwa maka onye ọ bụla n'ụzọ n'okpuru
kpọmkwem site iPhone
si iTunes ndabere
Nyefee Ndi ana-akpo si iPhone ka Mac site iCloud
iCould ugbu a bụ ndabara ọrụ na Apple na-enye gị ka mmekọrịta kọntaktị site na iPhone ka Mac. Lee ndị nzọụkwụ nke otú nyefee kọntaktị site na iPhone ka Mac site iCloud. Mbụ, jikọọ gị iPhone na Wi-Fi.
Nzọụkwụ 1. Kwado kọntaktsị na iCloud
Na gị iPhone, mgbata Ntọala> Gaa na iCloud. Gị banye Apple ID. Ọ bụrụ na ị nwere otu ma, biko ịmepụta otu akaụntụ. Chọta Ndi ana-akpo nhọrọ ebe a na-ehichapụkwa bọtịnụ maka kọntaktị na NA (mgbe button amama green).
Nzọụkwụ 2. Nyefee Ndi ana-akpo si iPhone ka Mac
E nwere ihe abụọ ebe n'ihi na ị na-azọpụta iPhone kọntaktị na Mac: Ndi ana-akpo (Address akwụkwọ) ma ọ bụ a vCard faịlụ na mpaghara mbanye na Mac.
# 1. Zọpụta iPhone kọntaktị na Mac Address akwụkwọ: Ọ bụrụ na ị na-melite iCloud na kọmputa gị, i nwere ike metụtara adreesị gị akwụkwọ na iCloud. Na nke a, ị nwere ike ịlele gị Addess akwụkwọ iji hụ ma gị iPhone kọntaktị na-na Address akwụkwọ ma ọ bụ. Ọ bụrụ na ị nyeere gị iCloud on Mac, ị ga-eguzobe ya mbụ. Pịa obere apple na akara ngosi na n'elu aka ekpe gị Mac ma họrọ System Mmasị. Chọta iCloud na abụọ-pịa imeghe ya. Gị banye Apple ID. Pịa Ndi ana-akpo (Address akwụkwọ) na ndị ọzọ ọrụ ị ga-amasị nwee. Mgbe ahụ, ị pụrụ ịhụ na gị niile iPhone kọntaktị na-zigara gị Mac
# 2. Zọpụta iPhone kọntaktị na Mac dị ka a vCard faịlụ: Mepee a nchọgharị weebụ na gị Mac na-emeghe iCloud.com. Na mgbe ahụ gị banye Apple ID. Pịa Ndi ana-akpo akara ngosi. Pịa ntọala icon na ala ekpe ma họrọ Export vCard.
Olee otú Zọpụta Ndi ana-akpo si iPhone ka Mac Kpọmkwem
Ụfọdụ ndị na-eme mkpesa na ha adịghị achọ iji iCloud nyefee kọntaktị site na iPhone ka Mac maka nchekwa ihe. Ok, na nke a, i nwere ike na-amasị-azọpụta kọntaktị site na iPhone ka Mac ozugbo. Na-esonụ bụ nzọụkwụ maka otú ime ya.
Download na wụnye Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac iPhone Data Recovery). Ọ bụ software nke ga-enyere ị na-azọpụta kọntaktị site na iPhone ka Mac ozugbo. Na-agba ọsọ ya na gị na Mac na jikọọ na gị iPhone na gị Mac site na iPhone eriri USB. Pịa naputa site na iOS Ngwaọrụ.
Ọzọ, ọ bụrụ na gị iPhone bụ iPhone 4 ma ọ bụ 3GS, ị kwesịrị:
Ọ bụrụ na ị na-eji iPhone 5 ma ọ bụ iPhone 4S, pịa Malite button na isi window.
Nzọụkwụ 2. Malite ike iṅomi gị iPhone
Mgbe ihe omume ahụ na-amalite ịgụ isiokwu gị iPhone, ọ ga-adị ka snapshot egosi.
Nzọụkwụ 3. Preview ma nyefee iPhone kọntaktị na Mac
Ị pụrụ ịhụ Ndi ana-akpo si gị iPhone na ekpe sidebar. Ịnwere ike ihuchalu kọntaktị niile na a hụrụ na gị iPhone mgbe iṅomi. Họrọ Ndi ana-akpo na ego na ndepụta otu otu, mgbe ahụ, akara ndị ị chọrọ na pịa Naghachi. Na mgbe ahụ a niile iPhone kọntaktị ga-azọpụta na gị Mac ozugbo.
Bubata kọntaktị iPhone ka Mac site iTunes ndabere
Ụfọdụ ndị mmadụ jụrụ ọ ga-bubata kọntaktị iPhone ndabere faịlụ (iTunes ndabere) ebe ọ bụ na kọntaktị na-kwadoo na faịlụ. Nke bụ eziokwu bụ na Apple mgbe-enye gị ohere iji lelee otu faịlụ na iTunes ndabere faịlụ gwụla ma ị weghachi gị iPhone na ya. Dabara nke ọma, i nwere ike ịgbalị Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac iPhone Data Recovery) wepụ iPhone kọntaktị site na iTunes ndabere faịlụ.
Nzọụkwụ 1. Download Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac)
Download na wụnye Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac) na gị Mac. Agba ya ma họrọ iji naghachi n'aka iTunes ndabere File. Ọ ga-egosipụta gị niile iTunes ndabere faịlụ. Ọ bụrụ na e nwere ihe karịrị otu ndabere faịlụ gị iPhone, họrọ onye na a na-adịbeghị anya ụbọchị, na pịa iṅomi wepụ ọdịnaya nke ndabere faịlụ.
Nzọụkwụ 2. Save iPhone conacts ka Mac Akwụkwọ Adreèsị
Mgbe iṅomi okokụre, ị nwere ike ihuchalu dum ọdịnaya nke gị iPhone kọntaktị ebe a. Lelee kọntaktị ịlele igbe na pịa Naghachi ịzọpụta gị iPhone kọntaktsị na Mac. Mgbe ahụ, na-emeghe Address Book na zọpụta kọntaktị faịlụ na gị Mac. Họrọ niile .vcf kọntaktị na ịdọrọ ha niile ka adreesị akwụkwọ. Ọ dị mma. Na ị na-aga nke ọma kpọfere kọntaktị site na gị iPhone na Mac Address Book.
The n'ụzọ kwụ ọtọ ụzọ mmekọrịta kọntaktị site na Mac ka iPhone ga-eji iCloud. Ma ọ bụ ndabara ụzọ Apple awade nyefee kọntaktị site na Mac ka iPhone. Ọ bụrụ na ị na-eme adịghị dị ka iji iCloud, ị nwere ike bulite gị kọntaktị na Gmail mbụ na transfer kọntaktị site na Gmail ka iPhone mgbe e mesịrị na gị Mac. Agbanyeghị, ka na-a anya na otú iji iCloud ka mmekọrịta kọntaktị site na Mac ka iPhone.
Nzọụkwụ 1. Mbido iCloud on Mac
Pịa apple na akara ngosi na n'elu aka ekpe gị Mac na họrọ System Mmasị. Chọta na-emeghe iCloud. Gị banye Apple ID. Ego Ndi ana-akpo (Address akwụkwọ) na ndị ọzọ ọrụ ị ga-amasị enyere ndị na-ebufe na iCloud.
Nzọụkwụ 2. Nyefee Ndi ana-akpo si iPhone ka Mac site iCloud
Jikọọ gị iPhone na Wi-Fi. Mgbata Ntọala> Gaa na iCloud na gị iPhone. Gị banye Apple ID. Ehichapụkwa Ndi ana-akpo bọtịnụ NA.
Copy Songs N'etiti iPhone na Mac
Bugharịa Photos si iPhone ka Mac
Nyefee iPhone Video ka Mac
Copy Playlist si iPhone ka iTunes
Mmekọrịta iTunes Music ka iPhone
Ụzọ dị mfe iji mmekọrịta iPhone na Mac
Ndabere iPhone enweghị iTunes on Mac
Nyefee iPhone Appps Back to iTunes
Top 10 Photo ụlọ ndò ngwa ọdịnala n'ihi iPhone
> Resource> iPhone> Olee otú iji bubata kọntaktị iPhone ka Mac